ဘိန်းစာပင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘိန်းစာပင် (ရုက္ခဗေဒအမည် မှာ Mitragyna speciosa ဖြစ်သည်) သည် အပူပိုင်း အမြဲစိမ်းသစ်တောတွင် ပေါက်ရောက်လေ့ရှိသည့် အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသတွင် မူလပေါက်ရောက်သော ကော်ဖီမျိုးနွယ်ဝင်အပင်ဖြစ်သည်။ အများသိကြသည့် အခြားအမည်မှာ ကထုန့် သို့ မဟုတ် ကရထုန့် (kratom) ဖြစ်သည်။ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီရှား၊ မလေးရှား၊ မြန်မာနှင့် ပါပူအာနယူးဂီနီနိုင်ငံ ရှိ ‌‌ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများက တိုင်းရင်းဆေးအဖြစ်အသုံးပြုလာသည်မှာ လွန်ခဲ့သည် ၁၉ ရာစုကတည်းကပင် ဖြစ်သည်။ ဘိန်းစာပင်တွင် ဘိန်းကဲ့သို့ မိန်းမောစေသော ဓာတ်ပါပြီး လန်းဆန်းတတ်ကြွစေသည့် သတ္တိ နှစ်မျိုးလုံး ဖြစ်စေတတ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်စစ်တမ်းအရ ဘိန်းစာပင်၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်း နှင့် အန္တရာယ်ကင်းသည် ဆိုသည်မှာ မရှင်းလင်းချေ၊ သုတသနေပြုလုပ်ထားမှု အနည်းငယ်သာ ရှိသည့်အတွက် ဆေးဝါးကုသရေးပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုရန် အတည်မပြုထားချေ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အမေရိကန် အစားအသောက်နှင့်‌ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနက မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို ကုသရေးတွင် အန္တရာယ်ကင်းသည် သို့မဟုတ် ထိရောက်မှုရှိသည်ဟူသော အထောက်အထားမရှိဟု ထုတ်ပြန်ပြောကြားထားသည်။ အချို့လူနာများက နာတာရှည် နာကျင်မှုများကို ကုသရန်၊ ဘိန်းဖြတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော လက္ခဏာများကို ကုသရန်နှင့် စိတ်အပန်းဖြေရန်အတွက် ဆေးဝါးအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ငါးမိနစ်မှဆယ်မိနစ်အတွင်းစတင်ပြီး နှစ်နာရီမှငါးနာရီအထိ ကြာမြင့်သည်။
ယေဘုယျ အသေးစား ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မှာ အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်းဖြစ်ပြီး ပိုမိုပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာ လိင်အင်္ဂါ ထောင်မတ်မှုအား ကမောက်ကမဖြစ်စေခြင်း၊ ဆံပင်ကြွတ်ခြင်းနှင့် ဝမ်းချုပ်ခြင်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ပိုမိုတိကျသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုများမှာ အသက်ရှူနှုန်းနှေးခြင်း၊ တတ်ခြင်း၊ ဆေးစွဲလမ်းခြင်း နှင့် စိတ်မူမမှန်ခြင်း တို့ ပါဝင်သည်။ အခြား ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့် နှလုံးခုန်နှုန်းမြင့်မားခြင်း နှင့် သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်းအား အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခြင်းနှင့် အသည်းအဆိပ်သင့်ခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။ သုံးစွဲခြင်းအား ရပ်တန့်လိုက်ပါက ဆေးဖြတ်ခြင်း လက္ခဏာများ ခံစားရနိုင်သည်။ ဘိန်းစာရွက်ချည်းသက်သက် အသုံးပြုခြင်း နှင့် အခြား ပစ္စည်းများဖြင့်‌ ရောနှောအသုံးပြုခြင်းကြောင့် သေဆုံးမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ပြင်းထန်သော အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမှုမှာ ရှားပါးပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် ဆေးပမာဏအမြောက်အများအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဘိန်းစာရွက်ကို အခြား ပစ္စည်းများနှင့် အသုံးပြုသောအခါ၌ ဖြစ်စေတတ်သည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၁၆ နိုင်ငံတွင် ဘိန်းစာအပင်နှင့်အရွက်အား တရားမဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း FDA က ဘိန်းစာရွက်အား ဖြည့်စွက်စာအဖြစ် အသုံးပြုရန် တင်သွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းကို တားမြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ ဘိန်းစာရွက် အသုံးပြုခြင်းမှ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်နိုင်ချေနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာ၏ စိုးရိမ်မှုများတိုးများလာနေသည်။ အချို့သောတရားစီရင်မှုများတွင် အဆိုပါအရွက်နှင့်အပင် ရောင်းချခြင်းနှင့်တင်သွင်းခြင်းကို ကန့်သတ်ထားသည်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များကလည်း သတိပေးချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။
ဘိန်းစာပင် သည်အမြဲစိမ်းသစ်ပင်ဖြစ်ပြီး ၂၅ မီတာ (၈၂ ပေ) အထိကြီးထွားနိုင်သည်။ ၎င်း၏ ပင်စည်သည် အချင်း ၀.၉ မီတာ (၃ ပေ) အထိကြီးထွားနိုင်သည်။ ပင်စည်သည် ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ပြီးအပြင်ဘက်အခေါက်သည်ချောမွေ့ကာ မီးခိုးရောင်ဖြစ်သည်။ အရွက်များသည်အစိမ်းရင့်ရောင်ရှိပြီးတောက်ပသည်။ ၁၄-၂၀ စင်တီမီတာ (၅.၅-၇.၉ လက်မ) ရှည်လျားပြီးအပြည့်အဝပွင့်သောအခါ ၇-၁၂ စင်တီမီတာ (၂.၈–၄.၇ လက်မ) ကျယ်နိုင်သည်၊ ovate-acuminate ပုံစံနှင့် ရွက်ကြော ၁၂- ၁၇စုံရှိပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံ ကြီးထားကြသည်။ ပန်းပွင့်သည် အကိုင်းအခက်များအဆုံးတွင် သုံးစုတွင်ပေါက်သည်။ ဝတ်ဆံအိမ်သည် (calyx-tube) သည် ၂ မီလီမီတာ (၀.၀၈ လက်မ) ရှည်ပြီး ဝတ်ဆံခေါင်း ၅ခုရှိသည်၊ corolla-tube သည် ၂.၅–၃ မီလီမီတာ (0.098-0.12 in) ရှည်လျားသည်။
↑ "New drugs of abuse" (February 2015). Pharmacotherapy 35 (2): 189–97. doi:10.1002/phar.1522. PMID 25471045.
↑ "From Kratom to mitragynine and its derivatives: Physiological and behavioural effects related to use, abuse, and addiction" (2013). Neurosci Biobehav Rev 37 (2): 138–151. doi:10.1016/j.neubiorev.2012.11.012. ISSN 01497634. PMID 23206666.
↑ Gottlieb, Scott (6 February 2018)။ Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the agency's scientific evidence on the presence of opioid compounds in kratom, underscoring its potential for abuse။ US Food and Drug Administration။6February 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Following "the Roots" of Kratom (Mitragyna speciosa): The Evolution of an Enhancer fromaTraditional Use to Increase Work and Productivity in Southeast Asia toaRecreational Psychoactive Drug in Western Countries" (2015). BioMed Research International 2015: 1–11. doi:10.1155/2015/968786. PMID 26640804.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘိန်းစာပင်&oldid=548398" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၉:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။